May 17, 2021 - Achawlaymyar
ယောကျာ်းဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းဟာ ထိုင်ခုံကို မှီထိုင်ရင် ဗိုက်ခေါက်ထွက်ပါတယ် ( gym ဘယ်လောက်ဆော့ဆော့ ထွက်တယ် ,တကယ် ) တစုံတယောက်က နင် ဒီနေ့ သိပ်လှတာပဲလို့ ပြောလာခဲ့ရင် ယုံလိုက်ပါ။ ကိုယ်ဟာ အရင်ခါတိုင်း နေ့တွေထက် ဒီနေ့ပိုလှတယ်။ ညဘက် သွားတိုက်ထားလဲ မနက်မိုးလင်းလို့ ခံတွင်းအနံ့ရှိတယ် ဆိုတာ ပုံမှန်ပါ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ဘယ်သူမှ မွှေးကြိုင်မနေပါဘူး။ ကိုယ်က အသားညိုတယ်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျနေပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသူတွေဟာ tanned skin ရဖို့ နေပူထွက်ခံနေရတာကို သတိရပါ။ ကိုယ့်ဘဝကို ကယ်တင်ဖို့ တစုံတယောက်လိုနေပြီ မထင်ပါနဲ့။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ရုန်းကန်ကူးခတ်နေကြရတာပါ။ ကိုယ့်မျက်နာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အစိတ်အပိုင်းတွေ အကုန်လုံးဟာ ၁၀၀% လှမနေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ … Read more
ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အသက္ ၁ ၊ ၉ ၊ ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ ၊ ၇၃ ၊ ၈၁ ၊ ၈၉ ႏွစ္မ်ား၏ ပထမ(၄)လအတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ လိုက္နာရန္ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ယၾတာမ်ား ရတနာပုံဆိုက္တဲ့ကိန္းျဖစ္ပါတယ္ …။ ရတနာေတြကို သြားၿပီးသယ္ရတာမဟုတ္ပါဘူး …။ အဲလိုသြားသယ္ရင္ ပင္ပန္းတယ္ …။ သယ္ စရာမလိုဘူး …. ရတနာေတြက ကိုယ့္ဆီကိုေရာက္လာတဲ့ကိန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ …။ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျ ပာင္းလဲ ျမင့္တက္မယ္ …။ … Read more
အပူချိန် သတိပေးချက်မို့ အထူးသတိထားလုပ်ဆောင်ပါ။ မေလ ၂၀ရက်နေ့တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အပူချိန်မြင့်တက်မည်ဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းတို့တွင် 42°C~45°C စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် 43°C~47°C အထိမြင့်တက်နိုင်ပါသည်။\_ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ အဖိုးအဖွားများနှင့် ကလေးငယ်များကို အေးမြတဲ့အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ဂရုတစိုက်ထားရှိပေးပါ။\_\_ နံနက် 11:00 AM မှ ညနေ 5:30 PM အချိန်အတွင်း ရေချိုးခြင်း၊ မျက်နှာသစ်ခြင်း၊ဂုတ်ပိုးရေဆွတ်ခြင်းများ လုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။ မေလ ၂၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်း အပူချိန်များ တဖြေးဖြေး လျော့ကျလာနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ 17/05/2021…at…10:06am….(MST) Zawgyi Version အပူချိန် သတိပေးချက်မို့ အထူးသတိထားလုပ်ဆောင်ပါ။ မေလ ၂၀ရက်နေ့တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အပူချိန်မြင့်တက်မည်ဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းတို့တွင် 42°C~45°C စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် 43°C~47°C အထိမြင့်တက်နိုင်ပါသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ အဖိုးအဖွားများနှင့် ကလေးငယ်များကို အေးမြတဲ့အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ဂရုတစိုက်ထားရှိပေးပါ။ နံနက် … Read more
လှပတဲ့သူကိုမရွေးချယ်ပါနဲ့ သင့်ဘဝကိုလှပအောင်လုပ်ပေးမဲ့သူကိုပဲ့ရွေးချယ်ပါ ငါ ” မှား ” ရင်ငါ့ကို ”မနှိမ် ” ပါနဲ့ငါ့ကို ပြင်ပေးပါ…. ပြန်လှည့်ပြီး ” နိဒါန်းကို ”ပြောင်းလို့ မရတော့ပေမယ့်ရောက်ရာ နေရာက ပြန်စပြီး” နိဂုံး ” ကိုတော့ ပြောင်းလို့ရပါတယ် … မိဘ က သင့် ဘဝ ကိုမူရင်း မွေးပေးလိုက်တာနော်မိတ္တူ ဘဝဖြင့် အဆုံးမခံပါနဲ့ … ဘဝ ကောင်းကို ရခဲ့တာ မဟုတ်သလိုဘဝ ဆိုးကိုလည်း ရခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဘဝ ပဲ ရခဲ့တာပါ အဲ့ ဘဝ ကို အကောင်း အဆိုးဖြစ်အောင်တို့တတွေက ဖန်တီး လိုက်ကြတာပါ … ကျရှုံး မှာ မကြောက်ပါနဲ့မကြိုးစား ကြည့်မိမှာကိုသာကြောက်ပါ … သဘော … Read more
ာင်းသူလေးရဲ့တောင်းပန်စာကြောင့် ဆရာတစ်ယောက် မျက်ရည်မခိုင်ဖြစ်ရလေတယ် ဖိလစ်ပိုင်မှာ စားဝတ်နေရေးအခြေအနေကြောင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကလေးတွေ ကျောင်းမှာ စာမသင်နိုင်ကြပါဘူး။ အခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ ကျောင်းတွေရှိတာတောင် မိဘတွေဟာယူနီဖောင်းဖိုး ၊ ဖိနပ်ဖိုးနဲ့ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကြေးတွေမတတ်နိုင်ကြောင့် ကလေးတွေကိုကျောင်းမထားပေးနိုင်ဘူး။ Nueva Ecija ဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုအမြင့်ဆုံးဒေသဖြစ်နေပါတယ်။ ၂ဝ၁၅တုန်းက စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တော့ ထိုဒေသမှာ အထက်တန်းကျောင်းနဲ့တင်ရပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေများပါတယ်။ ကောလိပ်နဲ့ အခြားအပြင်ကျောင်းတွေ ဆက်မတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က Christian Jay ဆိုတဲ့ ကျောင်းဆရာဟာ သူ့ဆီကိုရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းပန်စာကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တင်ခဲ့တယ်။ ထိုကျောင်းသူလေးဟာ သူစာသင်ချိန်တိုင်း အတန်းထဲမှာမရှိဘူး။ ကျောင်းပျက်ရက်တွေလည်းအရမ်းများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ နေ့လည်စာစားပြီး အခန်းထဲနားနေချိန် စားပွဲပေါ်မှာ စာလေးတစ်စောင်တွေ့ရတယ်။ စာကိုဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တင်လိုက်တော့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း share ပေါင်းရာကျော်သွားတယ်။ … Read more
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတိုင်း ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းထဲက အရာ တစ်ခု ဆိုပေမယ့် ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ အရာမို့ လွယ်လွယ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်တဲ့ အရာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့လို တိုးတက်မှုတွေ၊ မယုံကြည်စရာ များတာတွေနဲ့ ခက်ခဲ ရုန်းကန်ရတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ပိုလို့တောင် လွယ်လွယ် မတွေးသင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အသက် (၂၅) နှစ် မတိုင်ခင် အိမ်ထောင် မပြုဖြစ်ရင် ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီး ကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂၅ နှစ် မတိုင်ခင်မှာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ လုံးဝ မစဉ်းစားသင့်ဘူးဆိုတာကို ဒီအချက်တွေ ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ လူငယ်ဘဝကို စွန့်လွှတ်ရမယ် လူငယ်ဘဝဆိုတာ အချိန်အများကြီး ရနေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်ဘဝမှာ အသက်ကြီးရင် ပြန်မရနိုင်မယ့် အချိန် … Read more
မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ရက်အချိန် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောမုန်တိုင်းတစ်လုံး မေလတတိယပတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမိုးကြို/မိုးဦးခန့်မှန်းချက်မှာ ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခင် ခန့်မှန်းချက်ထက်၃ရက်လောက်နောက်ကျပြီးမှဖြစ်လာမှာမို့ အနီးကပ်updateသတင်း ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်း ကိုကိုးကျွန်း၏အနောက်ဘက်တွင် ယခုမေလ ၂၂-၂၃ရက်နေ့တွင် လေထုမငြိမ်သက်မှုဖြစ်ပေါ်လာရာမှ မေလ ၂၄ နေ့တွငလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ဆက်လက်အားကောင်းလာပြီး မေလ ၂၅ရက်နေ့မှာ မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရရှိထားပါတယ်။ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ မြောက်(သို့)အနောက်-မြောက်ဘက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့လျား သွားနိုင်တယ်လို့တော့ ကနဦး ခန့်မှန်းပါတယ်။ မုန်တိုင်းပြင်းအား ယခုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မုန်တိုင်းဟာ စုဖွဲ့မှု၊ ရစ်ခွေမှုနှင့် ရေငွေ့ပါဝင်မှုတွေက အားကောင်းနိုင်တော့ မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းရာလမ်းကြောင်းတစ်လျောက်မှာ အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားနိုင်လို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်းရင်တော့အပျက်အစီးများနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှ ရေလုပ်သားများသတိထားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေ့နဲ့ကတော့မေလ ၂၅မှ ဇွန် ၂ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနေရာကျဲကျဲမှ … Read more
အနှီးလေးနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး ထုပ်ထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ ဝကစ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေး တွေကို တွေ့လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ ပွေ့ပိုက်နမ်းရှိုက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာ မှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ အရမ်းချစ်လွန်းလို့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနမ်း လိုက်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုနမ်းရှုံ့လိုက်ခြင်း ဟာ မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ ကလေးတွေအတွက် အန္တရာယ်တွေ အများကြီးဖြစ်စေနိုင်ပါ တယ်။ နှုတ်ခမ်းနဲ့ ပါးစပ်နား တစ်ဝိုက်ကို နမ်းလိုက်ခြင်းဟာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ကလေးတွေဆီ ပျံ့နှံ့စေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းကိုမနမ်းရဘူးဆိုတော့ ပါးလေးကိုရော နမ်းလို့ရနိုင်လားလို့မေးချင်စဖွယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ်မနမ်းသင့်ပါဘူး။ ဥပမာ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ကလေးကို အသည်းယားလွန်းလို့ နမ်းလိုက်တယ်ပဲဆိုပါစို့။ သူ့ရဲ့လက်ကလေးတွေကို သူပြန်စုပ်တဲ့အခါ သင်နမ်းထားတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ ရောဂါပိုးမွှား တွေဟာ သူ့ဆီ သွယ်ဝိုက်ပြီး ကူးစက်သွားမှာပါ မိဘတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ နွေးထွေးမှုတွေဟာ မွေးကင်းစကလေးလေးတွေရဲ့ … Read more
အမျိုးသမီးတိုင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်အချိန်တွင် အစားအသောက် အပူအစပ်တို့ကိုရှောင်ကျဉ်ပြီး အနေအထိုင်ကအစ ဆင်ခြင်၍ နေထိုင်ကြရသည် ယခုတွင်အသက်၂၂နှစ်အရွယ်ကောင်းမလေးဟာ သူမတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဆိုတာကို လုံးဝမသိရှိခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့် အနေအထိုင် အစားအသောက်တို့ကို တစ်ခုမှ မဆင်ခြင်ဘဲ နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူမဟာ ချစ်သူနှင့် လွန်ခဲ့သော ၅လခန့်ကပင် လမ်းခွဲပြတ်စဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ကိုလည်း သတိမပြုမိခဲ့ပုံ ရပေသည်။သူဟာ မွေးဖွားမည့် ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် ကြွက်သားများ အနည်းငယ်ကိုက်ခဲလာသည်ကို သတိထားမိသော်လည်း ပုံမှန်အတိုင်း ထင်မှတ်နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ရက်အရောက်တွင်မှ သူမဟာ မနက်စောစောရေထချိုးသည့် အချိန်တွင်မှ ကလေးမွေးတော့မည့်အတွက် သွေးများဆင်းလာမှသာ သတိပြုမိပြီး မိခင်ကို အော်ပြောခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ထို့နောက်မှ ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးသွားကာ ကလေးငယ်ကို အောင်မြင်စွာ မွေးဖွာနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Credit to original writing အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစားအေသာက္ အပူအစပ္တို႔ကိုေရွာင္က်ဥ္ၿပီး အေနအထိုင္ကအစ … Read more
“ခွင့်ပြုပါတော့အမေ”ကာမဂုဏ်နှောင်အဖွဲ့နှောင်ဖွဲ့လို့ရှည်ကြ “ခွင့်ပြုပါတော့အမေကာမဂုဏ်နှောင်အဖွဲ့နှောင်ဖွဲ့လို့ရှည်ကြာရှောင်မဟဲ့ဒီသာသနာဝယ်ကြည်ကြည်သာသာခွင့်ပေးညိုရောင်သန်းကေသာနွယ်ကို ဖြေကာကွယ်ခုဖြတ်လို့တွေးမုတ်ဆိတ်နဲ့ကျင်စွယ်မခင်တွယ်နှောင်နှေးရိပ်ပယ်မည်စိတ်မှာအေးစေဖို့ရိပ်သာပြေးလို့ခိုဝင် အညိုရောင်ဖန်သင်္ကန်းကိုလပန်ဆင်မြန်းဝတ်တော့မည်ပင်ရှေးသူမြတ်ထုံးအစဉ်ကိုနှလုံးယှဉ် ဥာဏ်ညှိလို့ သမာဓိသမ္ပဇဉ်အားစိုက်ဖို့ပြင်ခွင့်သာပြုပါတော့မာတုမိခင်ရယ်သာဓုပင်ခေါ်လိုက်တော့လေး။ ဗောဓိရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်ဘုရားမှရေးသားချီးမြှင့်သောတေးထပ်ဖြင့်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ဖို့ခွင့်ပြုပါရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်ချစ်သောမေမေရေ“မေသက်ထားဆွေ” crd…M. M. H zawgyi “ခွင့်ပြုပါတော့အမေ”ကာမဂုဏ်နှောင်အဖွဲ့နှောင်ဖွဲ့လို့ရှည်ကြာ “ခွင့်ပြုပါတော့အမေကာမဂုဏ်နှောင်အဖွဲ့နှောင်ဖွဲ့လို့ရှည်ကြာရှောင်မဟဲ့ဒီသာသနာဝယ်ကြည်ကြည်သာသာခွင့်ပေးညိုရောင်သန်းကေသာနွယ်ကို ဖြေကာကွယ်ခုဖြတ်လို့တွေးမုတ်ဆိတ်နဲ့ကျင်စွယ်မခင်တွယ်နှောင်နှေးရိပ်ပယ်မည်စိတ်မှာအေးစေဖို့ရိပ်သာပြေးလို့ခိုဝင်အညိုရောင်ဖန်သင်္ကန်းကိုလပန်ဆင်မြန်းဝတ်တော့မည်ပင်ရှေးသူမြတ်ထုံးအစဉ်ကိုနှလုံးယှဉ် ဉာဏ်ညှိလို့ သမာဓိသမ္ပဇဉ်အားစိုက်ဖို့ပြင်ခွင့်သာပြုပါတော့မာတုမိခင်ရယ်သာဓုပင်ခေါ်လိုက်တော့လေး။ ဗောဓိရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်ဘုရားမှရေးသားချီးမြှင့်သောတေးထပ်ဖြင့်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ဖို့ခွင့်ပြုပါရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်ချစ်သောမေမေရေ“မေသက်ထားဆွေ”